Ama-dashboard ama-5 we-Google Analytics Angeke Akuthuse | Martech Zone
I-Google Analytics ingasabisa abathengisi abaningi. Njengamanje sonke siyazi ukuthi zibaluleke kangakanani izinqumo eziqhutshwa yidatha eminyangweni yethu yezokumaketha, kepha abaningi bethu abazi ukuthi baqale kuphi. I-Google Analytics iyithuluzi lamandla lomthengisi ocabanga ngokuhlaziya, kepha angangeneka kalula kunalokho abaningi bethu abakubonayo.
Lapho uqala ku-Google Analytics, into yokuqala okudingeka uyenze ukukhipha eyakho analytics ngezigaba ezilingana nobukhulu. Dala amadeshibhodi ngokuya ngomgomo wokumaketha, isigaba, noma isikhundla. Ukusebenzisana kweminyango kubalulekile, kepha awufuni ukuhlanganisa amadeshibhodi wakho we-Google Analytics ngokushova wonke amashadi owadingayo kudeshibhodi eyodwa.
Ukuze wakhe kahle ideshibhodi ye-Google Analytics, kufanele:
Cabanga ngezilaleli zakho - Ingabe le yideshibhodi yokubika kwangaphakathi, umphathi wakho noma iklayenti lakho? Uzodinga ukubona amamethrikhi owalandelayo ezingeni lembudumbudu ngaphezulu kunomphathi wakho, isibonelo.
Gwema imfuhlumfuhlu - Zisindise ikhanda lokuzama ukuthola ishadi elifanele uma ulidinga ngokuhlela kahle amadeshibhodi wakho. Amashadi ayisithupha kuya kwayisishiyagalolunye kudeshibhodi ngayinye afanelekile.
Yakha amadeshibhodi ngesihloko - Indlela enhle yokugwema imfuhlumfuhlu ukuqoqa amadeshibhodi wakho ngesihloko, inhloso noma indima. Isibonelo, ungahle ubheke yomibili imizamo ye-SEO ne-SEM, kepha kungenzeka ufune ukugcina amashadi womzamo ngamunye kudeshibhodi ehlukile ukugwema ukudideka. Umqondo wokubona kwedatha ukuthi ufuna ukunciphisa ubunzima bengqondo, ngakho-ke izitayela nokuqonda kuyasivelela. Ukuhlukanisa amashadi kumadeshibhodi ngezihloko ezisekela leyo nhloso.
Manje njengoba unemihlahlandlela ethile engqondweni, nazi ezinye izinhlelo zokusebenza ezisebenzayo zedeshibhodi ngayinye ye-Google Analytics (Qaphela: Yonke imidwebo yedeshibhodi yedatha ye-Google Analytics ku- IdathaHero):
Ideshibhodi ye-AdWords - Ye-PPC Marketer
Inhloso yale deshibhodi ukukunikeza ukubuka konke ukuthi umkhankaso ngamunye noma iqembu lesikhangiso lenza kanjani, kanye nokuqapha imali oyisebenzisile nokukhomba amathuba okwenza kahle. Uthola futhi inzuzo eyengeziwe yokungadingi ukupheqa etafuleni lakho le-AdWords ngokungapheli. Ubumbudumbudu bale deshibhodi buxhomeke kuzinjongo zakho nakuma-KPI kunjalo, kepha amanye amamethrikhi okuqala okufanele uwacabangele:
Izindleko ngokutholwa ngakunye (i-CPA) nokuchitha ngokuhamba kwesikhathi
Ukuguqulwa ngombuzo wosesho ofanayo
Izindleko eziphansi Kokutholwa Kunye (i-CPA)
Ideshibhodi Yokuqukethwe - Okomaka Wokuqukethwe
Amabhulogi abe ngumgogodla wemizamo yethu eminingi ye-SEO njengabakhangisi. Avame ukusetshenziswa njenge-go-to lead gen machine, amabhulogi futhi angaba ukuxhumana kwakho kokuqala namakhasimende akho amaningi futhi asetshenziselwe ukubonwa komkhiqizo. Noma ngabe iyiphi inhloso yakho, qiniseka ukuthi udizayina ideshibhodi yakho unaleyo nhloso ngokulinganisa ukubandakanyeka kokuqukethwe, imikhondo ekhiqizwayo kanye nomgwaqo wonke wesayithi.
Isikhathi esizeni (sihlukaniswe ngeposi lebhulogi)
Amaseshini ngokuthunyelwe kwebhulogi kokuthunyelwe kwebhulogi
Bhalisa nge-blog post / isigaba seposi le-blog
Ababhalisi beWebinar (noma ezinye izinhloso zokuqukethwe)
Amaseshini ngomthombo / ngeposi
Izinga lokunciphisa ngomthombo / ngokuthunyelwe
Ideshibhodi Yokuguqulwa Kwesayithi - Ye-Growth Hacker
Ikhasi eliyisiqalo namakhasi okufika kungenzeka ahloselwe ukuguqula - noma yini inhlangano yakho echaza ukuguqulwa okufanele kube yikho. Kufanele uhlole i-A / B kulawa makhasi, ngakho-ke udinga ukuqapha ngokucophelela ukuthi amakhasi okufika aqhuba kanjani ngokususelwa kulezi zivivinyo. Kumakethe okhathalela ukukhula, ukuguqulwa kuyisihluthulelo. Gxila ezintweni ezinjengemithombo ephezulu kakhulu yokuguqula, isilinganiso sokuguqulwa ngekhasi, noma isilinganiso se-bounce ngekhasi / ngomthombo.
Izikhathi ngokufika kwekhasi / umthombo
Ukuqedwa kwemigomo ngokufika ekhasini / ngomthombo
Izinga lokuguqulwa ngekhasi lokufika / umthombo
Izinga lokubuyisa ngokufika kwekhasi / umthombo
Qiniseka ukuthi ulandelela ngokucophelela noma yikuphi ukuhlolwa kwe-A / B ngosuku. Ngaleyo ndlela, wazi kahle ukuthi yini ebangela ushintsho kumanani wokuguqulwa.
Ideshibhodi Yemethrikhi Yesayithi - YeMarketer yeGeeky
Lawa ma-metric anobuchwepheshe obuhle kepha angenza umehluko omkhulu maqondana nokwenza ngcono isiza sakho. Ukuze umbe ujule kakhulu, bheka ukuthi lawa ma-metric obuchwepheshe axhumana kanjani nokuqukethwe noma amamethrikhi omphakathi. Isibonelo, ingabe bonke abasebenzisi bakho be-Twitter beza ngeselula ekhasini elithile lokufika? Uma kunjalo, qiniseka ukuthi ikhasi lokufika lenzelwe iselula.
Isikhathi esichithwe ngokuphelele kusayithi
Ama-KPIs Asezingeni Eliphezulu - Okwe-VP Yokumaketha
Umqondo wale deshibhodi ukwenza ukugcina iso kumamethrikhi kube lula impela. Ngenxa yalokhu, awudingi ukubonisana nabantu abahlanu abahlukene ngaphakathi komnyango wakho ukuze uthole umbono ngempilo yemizamo yakho yokumaketha. Ukugcina yonke le datha endaweni eyodwa kuqinisekisa ukuthi noma yiziphi izinguquko ekusebenzeni kokumaketha ngeke zingabonakali.
Kuhola ngomthombo / umkhankaso
Ukusebenza kokumaketha nge-imeyili
Impilo kafaneli jikelele
Ukuxhumana nenani lokumaketha kuyo yonke inhlangano, sonke siya ngokuya sincike kakhulu kudatha. Sidinga ukucubungula ngokwanele ukuze siqoqe idatha efanele, siveze imininingwane ebalulekile futhi siphinde sikuxhumanise nezinhlangano zethu. Kungakho ungeke ukwazi ukungazinaki amathuluzi abalulekile afana neGoogle Analytics, ikakhulukazi uma uwahlukanisa kube ukulunywa okungasetshenziswa kakhulu, njengamadeshibhodi.
Tags: ukuchitha isikhangiso eminiama-dashboards ama-analyticsizinga lokunciphisaizinga lokubhampa ngomthomboizibalo zokuqukethweamamethrikhi wokuqukethweizibalo zokuguqulwaamamethrikhi wokuguqulaizinga lokuguqulwaukuguqulwa ngomkhankasoukuguqulwa ngombuzo woseshocpaiqhawe ledathalindokuhleamadeshobhodi wedathaukuqedwa kwemigomoI-google analyticsKPIama-analytics wekhasi lokufikaideshibhodi yekhasi lokufikaukufika kwamametherikhicpa ephansiukumaketha kpiukusetshenziswa kweselulaisistimu esebenzayoukulungiswa kwesikrinisessionsamaseshini ngeposiamaseshini ngomthomboisikhathi esizeniizikhathi zomsebenzisiababhalisile be-webinar